WebP: Ijikwa ụdị onyonyo emeghe ihe na GNU / Linux | Site na Linux
WebP: Jikwaa usoro onyonyo mepere emepe na Linux
WebP bụ a nhazi oyiyi de oghe emeghe kere Google ọtụtụ afọ gara aga, iji melite njikwa ihe onyonyo mgbe ị na-eme ha Mkpa ọkụ idebe a Ogo kacha mma, iji mee ka ngwa ngwa na ịlele na weebụsaịtị ngwa ngwa.
Kemgbe ahụ, kwuru ọhụrụ emeghe na uzo ozo na-ewu ewu na omenala image formats, dị ka JPG, PNG y GIF, ejirila mee ihe, ọ bụghị naanị na weebụ kamakwa na ngwa, dị ka WhatsApp y telegram kee gi akwụkwọ mmado, ekele maka ọtụtụ uru ya.
Ọtụtụ afọ gara aga, kpọmkwem na Jenụwarị 2013, na Blog Site Linux anyị na-ekwu maka usoro WebP na otu esi emejuputa ihe mgbochi GIMP. Kemgbe ahụ, afọ 5 mgbe emechara usoro ahụ WebP ya e emejuputa atumatu site kwuru ngwa nke GNU / Linux.
Etu esi emeghe ma ọ bụ mepụta faịlụ WebP na GIMP
N'oge a, usoro a kọwara n'elu adịghịzi mkpa, ebe ọ bụ na ngwugwu ahụ «gimp-webp» so n’ọtụtụ nchekwa nke ọtụtụ GNU / Linux Distros. Na nkwado site na ọba akwụkwọ dị ugbu a na ụfọdụ n'okpuru ngwugwu «libwebp5» o «libwebp6».
1 WebP: Mepee Isi Nhazi Ihe Oyi
1.1 Thumbnails nke WebP oyiyi na Thunar
1.2 Lelee ma dezie onyonyo WebP
1.3 Ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji mepụta (tọghata) onyonyo na WebP
WebP: Mepee Isi Nhazi Ihe Oyi
Ọkpụkpọ WebP nwere a ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ebe a kọwara ya:
"WebP bụ ụdị onyonyo ọgbara ọhụụ na - enye mkpakọ na enweghị mfu dị ukwuu maka onyonyo na weebụ. Iji WebP, webmasters na ndị mmepe weebụ nwere ike ịmepụta obere onyoonyo mara mma nke na-eme ka weebụ ngwa ngwa.".
"Ihe oyiyi efu WebP bụ 26% pere mpe ma e jiri ya tụnyere PNGs. Lossy WebP onyonyo dị na 25-34% pere mpe karịa ihe oyiyi JPEG nwere ya na akara mma SSIM. WebPoss na-efu efu na-akwado nghọta (nke a makwaara dị ka channel alpha) na-akwụ naanị 22% bytes ọzọ. Maka ikpe ebe a na-anabata mkpakọ RGB lossy, WebP na-efunahụ na-akwado nghọta, na-enyekarị nha 3 sizes obere nha tụnyere PNG".
Thumbnails nke WebP oyiyi na Thunar
Mepụta faịlụ a na-akpọ «webp.thumbnailer» na iwu na-esonụ iwu:
Fanye ọdịnaya na-esote ma chekwaa ma mechie faịlụ ahụ e kere:
Malitegharịa ekwentị onye ọrụ na nwalee site na imeghe Eke iji lee thumbnails nke ihe oyiyi WebP.
Lelee ma dezie onyonyo WebP
Maka ọrụ dị otú a, ana m akwado iji ya foto ihe nkiri Nomacs na nchịkọta ihe oyiyi XnConvert. Ọ bụghị ihe ngwa onyonyo niile ka na-akwado, yana usoro Weebụ. Offọdụ n'ime ha na enweghị m ike ime ka ha lelee ma dezie ihe oyiyi ahụ WebP es GPicView e Inkscape.
Ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji mepụta (tọghata) onyonyo na WebP
Ọ bụrụ na, enweghị aka GNU / Linux ezigbo ngwa maka ọrụ dị otú ahụ, enwere ọtụtụ ezigbo ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji tọghata ọtụtụ ihe, dịka faịlụ faịlụ ihe oyiyi. Ma kpọmkwem maka ihe oyiyi WebP anyị na-akwado na-agbalị: Na-atụgharị.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere otu usoro WebP eji kee ihe Akwụkwọ mmado Telegram na WhatsApp, pịa na-esote njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ụdị ihe oyiyi emeghe emeghe a na-akpọ «WebP» nke Google mepụtara otutu afo gara aga, na otu esi ejikwa onyogho na usoro a GNU / Linux; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » WebP: Ijikwa usoro onyonyo emeghe imeghe na GNU / Linux
Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka Ubuntu